OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION: November 2012
သမ္မတ (ဗိုလ်) ဦးသိန်းစိန် ကြံ့ဖွံ့အစိုးရက “လက်ပတောင်းကြေးနီစီမံကိန်းဖျက်သိမ်းရေး”အတွက် ငြိမ်းချမ်း စွာဆန္ဒပြနေသော သံဃာတော်များနဲ့ ပြည်သူများကို မီးလောင်တိုက်သွင်းပြီး အကြမ်းဖက် ဖိနှိပ်ပါတယ်။
“တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း”လို့ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၁/၂၀၁၂) မှာဖေါ်ပြပါတယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်မြဲနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ယခုကဲ့သို့ “တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ် နှင့်အညီ (ဗိုလ်) ဦးသိန်းစိန်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုများ” ကို ပြည်သူအများ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
တည်ဆဲအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းပြီးအကြမ်းဖက်သလို အခြေခံဥပဒေ စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲ အဓမ္မ အတည် ပြုပြီးလည်း အကြမ်း ဖက်တာပါပဲ။
ယခုအခါမှာ လက်ပတောင်းအရေးဟာ နေရာဒေသတစ်ခုမှာ ကွက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဒေသန္တရ အရေး အခင်း မဟုတ်ဘူး။ တပြည်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အရေးဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့ အရေးအခင်း ဖြစ်ပါတယ်။
(နအဖ) စစ်အစိုးရ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ “၂၀၀၃ ဒီပဲရင်းအကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှု”၊ “၂၀၀၇ သံဃာ အရေးအကြမ်း ဖက်မှု” များနဲ့ ယခု “လက်ပတောင်းမီးလောင်တိုက်သွင်းအကြမ်းဖက်မှု” ဖြစ်ရပ်ဟာ အနှစ်သာရနဲ့ အသွင် သဏ္ဌာန်အရအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။
လူထုခေါင်းဆောင်သည် လူထုဘက်မှ အမြဲရပ်တည်ပြီး လူထုကိုခေါင်းဆောင်မှုပေးရမည်။ လူထုကို ပြစ်တင်မာန်မဲနေခြင်းမျိုး မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ မည်သည့်နိုင်ငံမည်သည့်သမိုင်းတွင်ဖြစ်စေ ပြည်သူလူထု သည် ဘယ်သောအခါမျှ စတင်အကြမ်းဖက်ခြင်း မရှိပါ။ အမြဲတန်းအကြမ်းဖက်ခံရသူများမှာ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူများသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုကို အုပ်စိုးသူများဘက်ကသာ စတင်ကြစမြဲ ဖြစ် ပါတယ်။
ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မီးလောင်တိုက်သွင်း အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေတွင်း/ဥပဒေပ အတိုက်အခံ များ အနေဖြင့် လက်ပတောင်း ပြည်သူများဘက်မှ ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်တည်ကြဖို့နဲ့ အကာအကွယ် ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် မီးလောင်တိုက်သွင်း အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတဲ့ သံဃာတော် များနဲ့ ပြည်သူများကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ဝန်ချတောင်းပန်ပြီး ထိခိုက်နစ်နာမှုများအတွက် ဆေးကုသ မှုအပါအဝင် လျော်ကြေးပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိက အကျဆုံးအချက်မှာ လက်ပတောင်းပြည်သူများ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတဲ့ “ကြေးနီစီမံကိန်း (လုံးဝ) အပြီး အပိုင်ရပ်ဆိုင်း ရေး” တောင်းဆိုချက်ကို ဥပဒေတွင်း/ဥပဒေပအတိုက်အခံများ အနေဖြင့် အုံ့ပုန်း လုပ်မနေကြဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင် ပြီး ထိထိရောက်ရောက် အကောင် အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်ရေးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
“လက်ပတောင်းကြေးနီစီမံကိန်း(လုံးဝ) အပြီးအပိုင် ရပ်ဆိုင်းရေး” သာဖြစ်ရပါမယ်။ “ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ အရေး” ကဲ့သို့ သမ္မတ သက်တမ်း (၅ နှစ်မျှသာ) ရွှေ့ဆိုင်းတာမျိုး (လုံးဝ) မဖြစ်သင့်ပါ။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 3:53 PM No comments:
ဒီမနက် အိပ်ယာက ထထချင်း ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို တခုချင်း ကြည့်တယ်၊ Aye Chan Mon Media ကိုသဘောကျတယ်၊ Aye Chan Mon Media ထဲက သတင်းတခု ကြောင့် ဒီစာေ၇း ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်၇တယ်။ အဲဒီ .. ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ် စခန်း သွားေ၇ာက်စဉ် တရုပ်အစိုး၇ အပေါ်ထားရှိတဲ့ စိတ်နေသဘောထား နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ သတင်းပါ။ အဲဒီ သတင်းကို Aye Chan Mon က Tin Latt FB ပေါ်က ယူပြီးတင်လိုက်တာပါ၊ Tin Latt ၇ဲ့အမြင်က ဗကပကို တရုပ်က ကူခဲ့တယ် အခုလည်းတရုပ်က KIA ကိုကူညီနေတယ် လို့ ဆိုထားတယ်။
၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း၇ဲ့ပါးစပ်ကနေ “တရုပ်ကို လည်းတပည့်တော်တို့ကြောက်၇ တရုတ်ကိုလည်း တပည့်တော်တို့က ကြောက်ရတယ်ဘုရား တရုတ်ကိုလည်း တပည့်တော်တို့က ကြောက်ရတယ်ဘုရားပါတယ်” နောက် ပြီးတော့ “ တိန့် ရှောင်ဖိန်အစိုး၇တက်လာတဲ့ အခါမှာ ဒီထောက်ပံ့မှုတွေ အကုန်ဖြတ်လိုက်တဲ့ အခါကြတော့ ဗကပ ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ် .. ဒါကြောင့်တရုပ်နဲ့ လည်း ၇န်မဖြစ်၇ဲဘူး“ ဆိုပြီးတော့ မြန်မာ ပြည်သူတွေကို တရုပ်၇ဲ့ ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ ဆော်သြ လိုက်တဲ့ စကားကြောင့် ဗမာ Media နဲ့Think Tank Group တွေအကြားမှာ အတွေးအခေါ် အယူအဆ အမျိုးမျိုး ပြောဆိုေ၇းသား လာကြတာကို တွေ့ ၇ ပါတယ်၊ အဲဒီထင်ကြေးအမျိုးမျိုးတွေထဲက တချို့ ကောင်းပါတယ် .. တချို့ ထင်ကြေးတွေကိုကြည့်၇င် MSL, SLORC ခေတ်တုန်းက brainwash ထိခံထား၇တဲ့လူတွေ၇ဲ့ အေ၇းအသားတွေကိုလည်း တွေ့၇ပါတယ်။
အဲဒီ တရုပ်ကြောက် ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းရဲ့ဒေဿနာတော်ကြောင့် KIA နဲ့ကချင်တို့ ၇ဲ့တော်လှန်ေ၇းအပေါ် ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေနိုင်တာကိုလည်း စာေ၇းသူအနေနဲ့မြင်နေ၇ပါတယ်၊ စာေ၇းသူ နဲ့စာဖတ်သူ အားလုံး ဗမာပြည်၇ဲ့ပြဿနာ တွေ အမြန်ချုပ်ငြိမ်းေ၇းကို လိုချင်၇င် ကိုယ်တိုင် ဂဂနန ၁၀၀% မသိဘဲဖြီးဖြန်းေ၇းသားနေတာတွေကို ရှောင်ကျဉ် သင့်ပါတယ်၊ ဗမာပြည်မှာ လူမျိုးေ၇း မုန်းတီးမှု မီးစလောင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ ဘာသာေ၇း သတ်ဖြတ်မှုတွေ ဖြစ်နေပါတယ်၊ ပြည်တွင်းစစ်မီး မငြိမ်းသေးဖူး .. အကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲပြီး ပြည်သူလူထု ဒုက္ခေ၇ာက်စေမဲ့ အတွေးအခေါ်ေ၇းသားမှု တွေကို အထူးသတိထား၇ပါမယ်၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနာဂတ် တည်ဆောက်လို၇င် ဆင်ခြင်တုံ တ၇ား မရှိဘဲ ဘယ်လိုမှ ဖြစ်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကေအိုင်အေကို တရုပ်ကူညီ၇အောင် ကေအိုင်အေ အဖွဲ့ အနေနဲ့UNFC မှာ ဥက္ကဌ နေ၇ာ ယူလို့ ၇နိုင်ပါ့ မလား? တရုပ်က UNFC ကိုအနောက်ယိန်းတယ်ဆိုပြီး အားပေးထောက်ခံမှု မရှိဘူး UWSA အဖွဲ့ အနေနဲ့UNFC ထဲဝင်ဖို့အေ၇း တရုပ်၇ဲ့pressure ကြောင့် ဒီနေ့ ထိ မပါဝင်နိုင်ကြသေးတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ၀လူမျိုး ဟာ မြန်မာတိုင်း၇င်းသားဖြစ်တဲ့အလျေက် ၂၀၁၅ မတိုင်ခင် အစိုး၇ပြောနေတဲ့ BGF ကိုလက်ခံ မလား? တိုင်း၇င်းသားနိုင်ငံေ၇းမှာ ပါဝင်လာမလား ဆိုတာကတော့ UWSA ၇ဲ့ ဆုံးဖြတ်၇မဲ့အေ၇းကြီး အချက် တခုပါ၊ ဒီအတိုင်းဘဲ သွားမယ်ဆို၇င် အခက်အခဲများမှန်း UWSA ခေါင်းဆောင်တွေလည်း သိကြမယ် လို့ ယူဆ၇ပါတယ်၊ အ၇င် ဗကပ ခေတ်အတွေ့ အကြုံကလည်းရှိပြီးသား။ (နောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ် ဆိုတာတော့ .. စောင့်ကြည့်ရုံ ပေါ့)
ဗမာ့တပ်မတော်ချည်းဘဲ တိုက်နေရုံနဲ့ဒီစစ်ပွဲ ဒီလောက်ကြာလာစ၇ာ အကြောင်း မရှိသလို နိုင်ငံတကာ ကလည်း ၇ပ်ကြည့်နေစ၇ာ အကြောင်း ရှိမှာ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်ပါတယ်။
ဒီစစ်ပြီးဆုံးဖို့ က လူလိမ်အစိုး၇၇ဲ့ထိုးစစ်၇ပ်ပြီး ကျွံနေတဲ့တပ်တွေ ဆုတ်သွား၇င် ကေအိုင်အေ အနေ နဲ့စစ်ကိုင်း၊ မုံရွာ ထိ လိုက်တိုက်ကြမယ်မထင်ဘူး။
ဗမာတောမှာတောင် မကျေနပ်ချက်တွေက တပုံတပင် .. ကချင်တွေအနေနဲ့နေ့ နေ့ညည သတ်ဖြတ် ညဉ်းဆဲခံနေ၇တာ အနှစ်(၅၀) ကျော်နေပြီ ဆက်ပြီးငြိမ်ခံကြမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
Tu Lum Um FaceBook မှကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 2:52 PM No comments:
Letter from US Congressmen to President Barack Obama
Congressmen to Obama
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 5:16 AM No comments:
Media Release from the Kachin National Organization - UK
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 5:02 PM No comments:
ယနေ့မြန်မာ့နိုင်ငံေ၇း မြင်ကွင်း
Maung Myet Hmun's Article Dr Lun Swe Blog မှကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 4:23 PM No comments:
Kachin American Ranger/ OSS Detachment 101 ( WW II )
About the psychological warfare techniques used by the OSS Morale Operations Unit and Kachin guerrillas in Burma during World War II to demoralize the Japanese troops obstructing linkage of the Burma and Ledo roads.
Letter to President Obama from Kachin Communities(International)
Kachin Letter to President Obama
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 2:57 PM No comments:
Tammy Duckworth:Magrau grang ai Myu Shayi
Tammy Duckworth gaw Thai – American amyu sha rai nna .2012 US Mungdan Ra Lata poi hta Illinois mungdaw kaw na US House of Representatives lata hkrum ai wa rai nga ai.
US-Iraq Majan ten hta Black Hawk gawt nhtawm majan gasat lawm nga yang shiahpyen pyenli hpe hpyen niarocket wa hkra mat ai hpang shi nan mung hkala hkrum ai raitim asak nsi ai sha majan kaw na asak bai lawt wa ai num hpyen ninghkring langai mung rai nga ai.
Num niaatsam hpe madun mai ai ahkaw ahkang, masa, ginra hte shinggyim ahkaw ahkang hpe manu shadan ai shinggyim uhpawng ni hta law law mu lu nga ai. Anhte Jinghpaw Wunpawng labau hta mung "Lawhkum Ja Dim" "Sumhka Hkawn" zawn re ni nga lai wa yu sai zawn anhteaprat ban hta mung law law naw pru wa lu hkra anhte yawng lam hpaw, n-gun jaw ra ai.(Jinghpaw WP nialabau hta Lawhkum Ja Dim gaw "Gumchying Gumsa dawm nna Gumlau Majan byin ai ten majan jaubu galaw wa yu sai Num Jau Bu re.)
Laika ndai ka ai ngai nan gaw Republican nre zawn Democratic mung nrai nngai US mungdan de n-gaw htawt wa ai (10)ning sha naw re majaw grai naw hkaja rana tai ai majaw Independent hku nna, ya du hkra naw tsap nga nngai. Republican ni hta ningra ai lam law law nga ai zawn Democratic ni hta mung ngai hkam la tawn ai makam masham hte ram ram nhtan shai ai policy lawm ai majaw Independent hte naw myit pyaw nga nngai.
Yu Maya Hpyen Magam gun Dingsa
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 8:31 PM No comments:
တိုင်းရင်းသားတွေ အတူတကွ နေနိုင်တဲ့ ဥပဒေတရပ် လိုပါတယ်”
ဧရာဝတီ| November 5, 2012
ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် ဒု စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွန်မော် (ဓာတ်ပုံ – နန်းသီရိလွင် / ဧရာဝတီ)
ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) နှင့် မြန်မာ အစိုးရတပ်မတော်တို့ အကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွား နေသည်မှာ ၁ နှစ်ကျော်လာပြီ ဖြစ်သည်။ ၁ နှစ်ကျော်အတွင်း ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီနှင့် အလွတ်သဘော ၉ ကြိမ်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ၁ ကြိမ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော်လည်း တိကျသည့် နှစ်ဘက် သဘောတူညီချက် ကတိက၀တ်များ မရရှိခဲ့ပေ။ အစိုးရဘက်မှ KIA တပ်များကို စစ်ရေးအရှိန်လျှော့ပေးရန် တောင်းဆိုနေသကဲ့သို့ KIA ဘက်မှလည်း ခံစစ်သာရှိပြီး တပ်မတော်ကသာ တပ်ဆုတ်ပေးရမည်ဟု ပြောဆိုနေမှုများ ရှိနေသည်။ ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO)၊ KIA နှင့် မြန်မာ့ တပ်မတော်အကြား စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးအခြေနေများကို KIA ဒု စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်ကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် နန်းသီရိလွင်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထား ပါသည်။
မေး။ ။ ရွှေလီ ဆွေးနွေးပွဲကို ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော် ကိုယ်တိုင် ဘာကြောင့် မတက်ခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ စမေးချင်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲ မတိုင်ခင် အစိုးရဘက်က ဘယ်သူတွေ လာမယ်ဆိုတဲ့ လူစာရင်း ကြိုရထား တာရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ ဆွေးနွေးပွဲ ဘာလို့ မတက်သလဲဆိုတော့ ဆွေးနွေးပွဲတွေက KIO ဘက်က ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နဲ့ နိုင်ငံတော် အစိုးရဘက်က ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွေ့တာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေ ရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ အခြေအနေတွေနဲ့ လိုအပ်ချက်အပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ ကျနော်တို့ KIO ကနေ လိုအပ်တဲ့ သူတွေကို ပြန်ပြီးတက်ဖို့ အစီအစဉ်ပါ။ ဆွေးနွေးမယ့် နာမည်စာရင်းတွေ ကြိုမရဘူး။ ဘာတွေ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာ ကြိုပြီး အကြောင်းကြားတာ မရှိဘူး။ ဟိုကနေ အကြောင်းကြားတာ ကတော့ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ အကြောင်းကြားတာက ဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့တွေ လာမယ်လို့ အကြောင်းကြားတဲ့ စာပဲရတယ်။ ဒီစာကို အခြေခံပြီးတော့ ဒီကနေလည်း ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွေ သွားကြတာ။ ဒါပေမယ့် တကယ်လို့ ဟိုမှာ လိုအပ်တဲ့ အခြေ အနေအရ KIO ကနေ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ထဲမှာ မပါပေမယ့် လိုအပ်ရင် သွားဖို့က အဆင်သင့်ရှိပါ တယ်။ သွားမယ်ဆိုရင် လည်း ဒီကနေ သုံးနာရီခွဲလောက်ပဲ ကြာပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ရက်က အောက်တိုဘာလ မကုန်ခင်မှာ လုပ်ရအောင်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ ကျနော်တို့က ၃၀ ကနေ စရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့ ပြန်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ၃၁ လို့ ပြောလိုက်ရင်လည်း ကျနော်တို့က ဒီလရဲ့ နောက်ဆုံးရက်ကို သွားရွေးသလို ဖြစ်နေမယ်။ ၂၈ ကတော့ တနင်္ဂနွေ ဖြစ်နေတော့ ၂၉ ကို မမီနိုင်ဘူးဆိုတော့ ၃၀ ရက်နေ့မှာ စလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီး အကြောင်းပြန် လိုက်တာ။ သူတို့ဘက်ကနေ ၃၀ ရက်နေ့ လုပ်ဖို့ သဘောတူတယ်လို့ ပြန်အကြောင်း ကြားလာတယ်။
မေး။ ။ အခု ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဦးအောင်မင်းက နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်လာစေရမယ်လို့ ပြောသွား တာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချက် အပေါ်မှာရော KIO ရဲ့ သဘောထားက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
မေး။ ။ ဦးအောင်မင်းကတော့ နိုဝင်ဘာမှာ ထပ်တွေ့ချင်တယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ KIO ဘက်က နိုဝင် ဘာမှာ တွေ့နိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ အဓိကကတော့ ခုနကပြောသလို ဘယ်လို ပုံစံ ဆွေးနွေးကြမလဲ ဆိုတာကို သဘောတူကြရင် အချိန်မရွေး တွေ့လို့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဘက်ကနေ ပြောထားတာကတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ အောက်ကို ၀င်ပါ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပါလို့ ကြိုတင် ကန့်သတ်ချက်နဲ့ လုပ်ထားရင် ရှေ့ကို ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးရတာ အခက်အခဲ ရှိနိုင်တယ်။ အဲဒီလို ကြိုတင် ကန့်သတ်ချက်တွေ မထားဘဲနဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးကြမယ်၊ ဆွေးနွေးတဲ့ အခါကျမှ ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ ဆွေးနွေးမလဲ၊ ဒါကို အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ညှိနှိုင်းချင်တယ်။
ဖြေ။ ။ အခြေခံဥပဒေဆိုတာကတော့ နိုင်ငံတခုရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကျောရိုးဖြစ်တာကိုး။ KIO ရဲ့ အမြင် ကတော့ ၂၀၀၈ ဥပဒေက ပြည့်စုံမှုမရှိဘူး။ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ တိုင်းရင်းသားများ အခွင့်အရေး ကို အာမခံချက် ပေးမထားဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီလို အာမခံချက်မျိုးကို ပေးထားနိုင်တဲ့ အခြေခံဥပဒေမျိုး ဖြစ်ရမယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ အတူတကွ နေနိုင်တဲ့ ဥပဒေတရပ်လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြေခံ ဥပဒေကို ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ ဆိုတာကတော့ ဆွေးနွေးရမှာပေါ့။ ကြိုတင် ကန့်သတ်ချက်မထားတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမျိုး တွေ့ချင်တယ်လို့ ဒါကြောင့် ပြောနေရတာပါ။
မေး။ ။ အစိုးရ ငြိမ်းကော်မတီနဲ့ တရားဝင်ရော အလွတ်သဘောပါ တွေ့ခဲ့ကြတာ အခုရွှေလီ ဆွေးနွေးပွဲ ဟာ ၁၀ ကြိမ်မြောက် ရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလောက်ကြန့်ကြာနေတာပါလဲ။ တကယ်လို့ ငြိမ်းကော်မတီမှာ ဦးအောင်မင်း အစား ဒေါ်အောာင်ဆန်းစုကြည် ဆိုရင်ရော KIO အနေနဲ့ ဘယ်လို သဘောထားမလဲ။
ဖြေ။ ။ အဓိက အချက်ကတော့ မူပါပဲ။ တကယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ KIO ကို ၂၀၀၈ ထဲကို လာပါလို့ ပြောရင်တော့ ဒါအဆင်ပြေနိုင်မယ် မထင်ဘူး။ တကယ်လို့ ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၂၀၀၈ ထဲကို ၀င်လာပါဆိုတာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ညှိနှိုင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ KIO အနေနဲ့ကတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါလာမှ ဆိုတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတော် အစိုးရကနေ တာဝန် ပေးလိုက်တဲ့ ဘယ်သူနဲ့ မဆို ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာကို ကြိုပြီး ပြောထားပြီးသားပဲ။ KIO ရဲ့ ခံယူချက်က ဒီပြည်တွင်းစစ်ဟာ နိုင်ငံရေးစနစ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စစ်ဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်း ချင်တယ်။ အခု အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းရေး တပ်ဆုတ်တာတို့၊ ခံစစ်၊ ထိုးစစ်တို့ တပ်တွေကို ခွာရမယ်လို့ ပြောတဲ့ဟာတွေ အကုန်လုံးက ဒါ စစ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ စစ်ရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းတယ် ဆိုတာကတော့ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို အပြီးသတ် မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလို့ KIO က ယုံကြည်တယ်။
ဖြေ။ ။ ၃၀ ရက်နေ့ အစည်းအဝေးတုန်းက KIO ဘက်က ကိုယ်စားလှယ် ဦးဆွန်လွတ်ဂမ်က နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေကို အခု အစည်းအဝေးကနေစပြီး လုပ်သွားဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တာ၊ ကြိုတင် ကန့်သတ် ချက်များ မပါရှိသော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများကို ဒီအချိန်ကနေ စတင်ဖို့ ဆိုပြီး တောင်းဆိုလိုက်တာ။ အဲလို တောင်းဆိုလိုက်တာနဲ့ အစိုးရကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်က နောက် အစည်းအဝေးကို ဘယ်မှာ လုပ်မလဲလို့ မေးလိုက်ခြင်းဟာ ဒီအစည်းအဝေးမှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို မစနိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုတယ်လို့ KIO က ယူဆတယ်။
ဖြေ။ ။ တိုက်ပွဲက တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်။ အောက်တိုဘာ၂၈ လောက်ကတည်းက ရှမ်းပြည် နယ် တပ်မဟာ ၄ ဒေသဘက်မှာ အဓိက ထိုးစစ်တွေ လုပ်လာတယ်။ ၃၀ ရက်နေ့မှာ တပ်ရင်း ၃ ဒေသ၊ ဆဒုံးဒေသမှာ မြန်မာ့ တပ်မတော်က အင်အားဖြည့်တယ်။ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှာလည်း တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။
မေး။ ။ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) နဲ့လည်း အပစ်ရပ်ပြီးတဲ့ နောက်တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေ တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ရှိတယ်။ KIA ကိုလည်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးနေရင်း တဘက်က ထိုးစစ် ဆင်နေတယ်၊ တပ်မတော်ဘက်ကလည်း တပ်တွေ ပိတ်ဆို့ခံထားရတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဆိုတော့ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အစိုးရရော လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားတွေရော နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ဘာတွေ ညှိနှိုင်းဖို့ လိုနေတာပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ ပြောရတာခက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲတယ်ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းရေး မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာလည်း သိပ်မရှင်းဘူး။ အပစ်အခတ် ရပ်ထားတာကို ယာယီ ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ ပြောတယ်။ ပြည်သူ့စစ် ဖြစ်သွားတာက ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ ပြောတယ်။ အဲလို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ KIO အပါအ၀င် တခြား တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေလည်း လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု အပစ်ရပ်ထားတဲ့ အဖွဲ့တွေ ဘာမှ မပြောသေးဘူးဆိုတာလည်း အဲဒီအဆင့်ကို မရောက်သေးလို့ပါ။ အဲဒီအဆင့်ကို ရောက်သွားလို့ရှိရင် ပြန်ပြီး ပြဿနာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာရင်တော့ စစ်ရေးရော တခြားကိစ္စတွေပါ အကုန် ပြေလည်သွားမယ်လို့ ကျနော် ထင်တယ်လေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေး စနစ်ကြောင့် ဖြစ်လာ တာ။ ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ကို ညှိနှိုင်းပြီး ပြုပြင်လိုက်ပြီဆိုရင် ဒီအစွယ်အပွားဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတွေ အကုန်လုံး ပြေလည်သွားမယ်လို့ KIO က ဒီလိုပဲ ယုံကြည်တယ်။
မေး။ ။ ငြိမ်းကော်မတီ ဒုဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်းက ရွှေလီမှာ KIO ကို အချက်လေးချက် တောင်းဆိုသွားပါ တယ်။ အဲဒီအချက်တွေကို လိုက်လျောပေးဖို့ ရှိမရှိ သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ လောလောဆယ်တော့ ကျနော်တို့ စဉ်းစားနေတုန်းပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လက်တွေ့ကျဖို့ လိုပါတယ်။ ပူတာအို လမ်းတွေဆိုတာက ကျနော်တို့ တပ်မဟာ ၁ ဒေသဘက်ကို ဖြတ်နေရတဲ့ လမ်းတွေ၊ အဲဒီတော့ တစုံတရာ သဘောတူညီချက်တွေ သေချာ အခိုင်အမာ လုပ်ပြီးမှပဲ ကျနော်တို့က နှစ်ဘက် အပြန်အလှန် ကတိပေးရမယ့် ကိစ္စဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ လက်တွေ့ကျဖို့ လိုပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ တကယ် ဖြစ်နိုင်လား မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဆိုတာကို အဓိက ကျနော်တို့က အခြေအနေ ကြည့်ရဦးမှာပါ။
မေး။ ။ အစိုးရ ငြိမ်းကော်မတီက ဒီနှစ် မကုန်ခင်မှာ UNFC (ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ) နဲ့ တွေ့ဖြစ်အောင် တွေ့မယ်လို့လည်း ပြောထားပြန်တယ်။ တကယ်လို့ UNFC နဲ့ ငြိမ်းကော်မတီ တွေ့တဲ့အခါ KIO ကရော ပါဝင်ဖို့ ရှိလား။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 6:14 PM No comments:
KIO ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ပညာရေးဌာနတာဝန်ခံ ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ်နှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်းခြင်း
Messenger News Journal (Monday, Nov 5, 2012)
KIO ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ပညာရေးဌာနတာဝန်ခံ ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ်
အရပ်သားအစိုးရအဖွဲ့လက်ထက်တွင် ပထမဦးဆုံး တရားဝင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို အောက်တိုဘာလ ၃ဝ ရက်က ရွှေလီမြို့၊ ကျင့်ချိန်ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ သည်။ မြန်မာအစိုးရဘက်မှ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့်သစ် တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်း၊ သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်၊ မပခ (တိုင်းမှူး) ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းထွန်းနောင်၊ ရမခ(တိုင်းမှူး) ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်စိုး၊ ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစပ်အောင်မြတ်၊ ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦး ပါဝင်လာခဲ့ပြီး KIO ဘက်မှ ပညာရေးဌာနတာဝန်ခံ ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ် ဦးဆောင်၍ ဦးခွန်ဆိုင်း၊ ဦးဇော်တောင်၊ ဦးခွန်နောင်၊ ဦးလပိုင်လ၊ ဦးဇော်နောင်၊ ဦးဂျီးနောင်၊ ဦးနော်ထွယ်နှင့် ဦးဆိင်းခေါတို့ တက်ရောက်လာခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မကျင်းပမီက နှစ်ဘက်တပ်များကိစ္စကို ဦးစားပေး ဆွေးနွေးမည်ဟု သတင်းများ ထွက် ပေါ်လာခဲ့သော်လည်း KIO ဘက်မှ ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော် တက်ရောက်လာခဲ့ခြင်း မရှိသလို မြန်မာ အစိုးရဘက် မှလည်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးကလည်း တွေ့ဆုံပွဲသို့ လာရောက်ခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ မူဆယ်မြို့တွင် နေရစ်ခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်အဖြစ် KIO ဘက်မှ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ အဆက် ဆက်တွင် အစဉ်တစိုက် တောင်းဆိုလာခဲ့သော နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ရန် ကိစ္စကို အစိုးရဘက်မှ သဘောတူညီခဲ့သော်လည်း လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော စစ်ရေးအရှိန်များ လျှော့ချရေးနှင့် ပတ်သက်၍မူ ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
လာမည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ KIO ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၊ ပညာရေး ဌာန တာဝန်ခံ ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ်နှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်းထားသည်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မေး ။ ။ အခုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော် မပါလာနိုင်တာ ဘာကြောင့်လဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ကို အခုအစိုးရက ထိုးစစ်ဆင်နေတာလေ။ သူက ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ ကြီး ကြပ်ကွပ်ကဲတာတွေ လုပ်နေရတော့ တာဝန်က များတယ်။ ဒါကြောင့် မအားမလပ်ဖြစ်ပြီးတော့ မရောက် နိုင်တာပါ။
မေး ။ ။ KIO ဘက်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်စရာ မလိုတော့ဘူး။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပဲ လုပ်မယ် လို့ ပြောနေတာရှိတယ်လေ။ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ။ ဘယ်အချက် တွေကို အဓိက ဆွေးနွေးမှာလဲ။
ဖြေ ။ ။ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ KIO ဘက်က လိုချင်တာကတော့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေကို ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ ဖက်ဒရယ်ပေးဖို့ အဓိက ပါပဲ။ ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို ကိုယ်အုပ် ချုပ်ဖို့ အဓိက က ဒါပဲ။
မေး ။ ။ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီထက်ပိုပြီး ရှင်းပြပေးပါလား။ အခု ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်း ကချင်လူမျိုးပဲလေ။ ပြီးတော့ လွှတ်တော်မှာလည်း ကချင်လွှတ်တော်အမတ်တွေ ရှိနေတာပဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒါက ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် မဟုတ်ဘူးလေ။ ဒါက သူတို့ လုပ်ထားတဲ့ ဥပဒေအရ သူတို့ဥပဒေနဲ့ အုပ်ချုပ်တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အခုလိုချင်တာက ကိုယ့်ပြည်နယ်ရဲ့ ဥပဒေကို ကိုယ်ပြဌာန်းပြီးတော့ အုပ်ချုပ်မှာပေါ့။
မေး ။ ။ အခု တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာရော ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုတွေ ရခဲ့တယ်လို့ ယူဆပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုထားတဲ့ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကို လုပ်မယ်ဆိုတာ သဘောတူ တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောတာပေါ့။ ဒါက တစ်ဆင့်အောင်မြင်တယ်ပေါ့။ အရင်က ဒီလို မပြောဘူး လေ။ ဒါကြောင့် အခု ဒီလို ပြောတာတော့ အနည်းငယ် အောင်မြင်တယ်လို့ ပြောနိုင်တာပေါ့။
မေး ။ ။ တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်က လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ အခု အရပ်သားအစိုးရအဖွဲ့ လက်ထက်မှာ လုပ်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ဘာများကွာခြားတာ တွေ့ရပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ အရင်ကတော့ စစ်အစိုးရဆွေးနွေးပွဲဆိုတော့ ဒီလို ပြောတာတွေ မရှိဘူး။ စစ်အမိန့်နဲ့ပဲ။ ရရမယ် ဆိုရင် ရကို ရရမယ်။ သွားပြောပြရုံပဲလေ။ စစ်အစိုးရလက်ထက်က ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကတော့ သူတို့ ပြောတာကို လိုက်နာရမယ်။ သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ရမယ်။ ဆန္ဒကိုထုတ် ဖော်ခွင့်မရှိဘူး။ ကွာတာပေါ့။ အခုကတော့ တပိုင်းတစတော့ ထုတ်ဖော်ပြောခွင့်ရလာတာပေါ့လေ။ လူတွေအားလုံး ပြောခွင့် ရတယ်။
မေး ။ ။ နောက်လာမယ့် ဆွေးနွေးပွဲတွေကို ဗန်းမော် (သို့မဟုတ်) မူဆယ်မှာလုပ်ဖို့ ဝန်ကြီး ဦးအောင် မင်း က တောင်းဆိုထားတဲ့အပေါ်မှာရော KIO ဘက်က ဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဒါက မပြောနိုင်သေးဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားရဦးမယ်။ ဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ့်နေရာကတော့ အခု ဒီတရုတ်ပြည်လို နိုင်ငံခြားတနေရာရာမှာပဲ ကောင်းတယ်။ နောက်ပြီး ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ လွတ်လပ် တဲ့နေရာပေါ့။ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတာ၊ ကန့်သတ်ထားတာ။ အမျိုးမျိုးပေါ့လေ။ အမျိုးမျိုး Pressure ပေးထား တာမျိုး မလုပ်ချင်ဘူး။
မေး ။ ။ အခု ဆွေးနွေးပွဲကြောင့် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲအရှိန်တွေ လျော့ကျသွားနိုင်မလား။
ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ မပြောနိုင်သေးဘူး။ ဒါက တိုက်ပွဲအရှိန်လျော့ဖို့ ဆွေးနွေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ တိုက်ပွဲဆိုတာကလည်း သူတို့တပ်မတော်ကပဲ တိုက်နေတာဆိုတော့။ အမြဲတမ်း ပြောတယ်လေ။ အမြဲတမ်းပဲ တိုက်ပွဲအရှိန်လျှော့ရအောင်ဆိုတော့ မလျှော့ဘူးလေ။ ကျွန်တော်တို့ KIO ဘက်ကတော့ သူတို့မလာရင် မပစ်ဘူး။ ပစ်စရာမှ မရှိတာ။ သူတို့လာပစ်မှ ပစ်တာ။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်နယ်ကို သူတို့ တက်လာတာကိုး။ အဲဒါပဲ။ သူတို့လျှော့ရင် စစ်ပွဲတော့ မရှိတော့ဘူး။
မေး ။ ။ နောက်တစ်ကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲမှာရော ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်တို့လို အရေးပါတဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် တွေ တက်ရောက်မှာလား။
ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအပေါ်မှာရော KIO အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကတော့ သူတို့အခြေခံဥပဒေနဲ့သူ အုပ်ချုပ်နေတာပေါ့။ အဲဒီအခြေခံဥပဒေကို ကျွန်တော်တို့က လက်မခံဘူး။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 2:09 PM No comments:
KIO ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် ဦးဂျီးနောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
‘နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ တပ်မတော်တစ်ခုပဲ ရှိရမှာပါ။ အဲဒီတပ်မတော်သည် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ဖြစ်ရပါမယ်’ ၊ KIO ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် ဦးဂျီးနောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Wednesday, 31 October 2012 14:40
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကော်မတီနှင့် KIO ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့တို့၏ ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သော KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် ဦးဂျီးနောင်နှင့် ဆွေးနွေးပွဲအပြီး တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မေး - အခုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲအရ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ သဘော တူညီမှု အပြည့်အ၀ရခဲ့ ပြီလို့ ပြောနိုင်ပြီလား။
မေး - အခုဆွေးနွေးပွဲမှာ နှစ်ဖက်တပ် တွေ ကိစ္စဆွေးနွေးဖို့ အဓိကလို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် မလာတဲ့အတွက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနက ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုးလည်း မတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။ လိပ်ခဲတည်း လည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ တပ်ကိစ္စကြောင့် စစ်ရှိန် တွေလျော့ သွားနိုင် သလား။ တိုးလာနိုင်သလား။
ဖြေ - တပ်ကိစ္စဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ အာဂျင်ဒါတစ်ခုမှ မသိရပါဘူး။ တပ်ကိစ္စလုပ်ဖို့ အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တပ်ကိစ္စဆိုတဲ့ နေရာမှာမူဘောင်ရှိရပါမယ်။ ဥပမာ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အရင် ဆွေးနွေးပွဲ တုန်းက တင်ထားတဲ့ပြဿနာ ဖြစ်ပွားနိုင်သောဒေသများ၊ အဲဒီကိစ္စမှာ ဘောင် မရှိဘဲနဲ့ ဟိုတပ်ဆုတ်၊ ဒီတပ် ဆုတ်နဲ့တော့ မပြီးနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီ တော့ပေါ်လစီရှိရမယ်။ ဘောင်ရှိရ မယ်။ ဘောင်ထဲမှာ ဆွေးနွေးဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံရေး အဓိကဆွေးနွေးရမှာပဲ။ အဲဒီမှာမှ IDP ကိစ္စ၊ လမ်း တံတား ကိစ္စ၊ လျှပ်စစ်မီးကိစ္စ၊ တပ်ကိစ္စတွေ က အဓိကဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အခု ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဖြစ်နေတာက စောစောကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်မင်း ပြောတယ်။ ၁၀၅ ပစ်တယ်ဆို တာ ကာကွယ်ရေးကအမိန့်ပေးမှ ရတယ်။ မြေပြင်မှာက တွေ့နေရ တယ်။ မြင်နေရတယ်။ လုပ်နေရ တယ်။ အဲဒါကျတော့ ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်လို့မရနိုင်တဲ့ အဖြစ် အပျက် တွေ။ နောက်ပြီး ရိက္ခာပို့တာပါ။ လမ်းမှာဖြတ်တိုက်တယ်။ သူတို့ပို့တဲ့ ရိက္ခာသည် အကြီး ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့သေနတ်တွေ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ၈၁ မမ မော်တာတွေ၊ ၆၀ မမတွေ၊ ၅၇ တွေ ကျွန်တော် မပြောချင်ဘူး။ ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အခါ သုံးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံအချင်းချင်းစစ်ဖြစ်တဲ့အခါ သုံး နိုင်တဲ့ လက်နက်တွေပါ။ သူတို့က အဲဒါပို့ပါတယ်။ သူတို့ပို့တဲ့ ရိက္ခာ ကြီးလွန်းပါတယ်။ ရိက္ခာပို့တယ် ဆိုရင် အရပ်သားအနေနဲ့က ဆန်၊ ဆီ၊ ဆားပို့တယ်ထင် ပါတယ်။မ ဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို ပစ်နေ တဲ့လက်နက်တွေ။ အဲလိုမျိုး နောက် ကြောင်းမှာ ပစ်နေရင် ဦးစီးချုပ်က မလာနိုင်ဘူး။ အခုလောလောဆယ် မနေ့က(အောက်တိုဘာ ၂၉) ရက်နေ့ က စပြီး ရှမ်းပြည်မှာရှိတဲ့ တပ်ရင်း (၉)ကို ရှမ်းမြောက်တပ်က ၀ိုင်းပိတ် ဆို့ပြီးတော့ တိုက်တယ်။ အခုချိန် ထိတိုက်နေတုန်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် လာချင်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ညွှန်ကြားရတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်တော့ သူ့အနေ နဲ့ ၀ိုင်ယာလက်စ်ပေါ်ကနေခွာလို့ မရပါဘူး။ မိအေးအော်တာပဲ ကြားပါတယ်။ ဂဏန်းကိုက်တာ အကုန် မမြင်ပါဘူး။ ဒီဒေသခံတွေ ခံရတဲ့ အပိုင်းခံကြရပါတယ်။ သူတို့ခမျာမှာ အော်မယ့်နေရာလည်း မရှိ၊ ပြောမယ့် နေရာလည်း မရှိ၊ ရန်ကုန်အထိ သွား ပြောဖို့လည်း အခြေအနေမပေးပါ ဘူး။ ဖားကန့်မှာ ၁၂၀ အမြောက် တွေကျတယ်။ လူပေါင်းကိုးယောက် သေတယ်။ လေးယောက် ဒဏ်ရာရ တယ်။ ရွာသား တွေဖြစ်တယ်။ အဲ ဒါကို တပ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ ရွာသားတွေ KIA ထောင်တဲ့ မိုင်းနင်းမိ လို့ဒဏ်ရာရတာ။ ဟုတ်ပြီ။ ရန်ကုန်သူ၊ ရန်ကုန်သား တခြား အားလုံးပေါ့။ သူတို့တွေက ယုံချင် ယုံလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေသခံ အဲဒီ မော်မောက်ရွာသား ကချင်တွေက လုံးဝမယုံပါဘူး။ ဖြစ်စဉ်က သူတို့မျက်စိအောက်မှာ ဖြစ်နေတာ။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ခံစားနေရတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် စစ်တပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီလို အပေါ်ယံပဲ ဆွေးနွေးလို့မရပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးလို့ရှိရင် အဲဒီတပ်တွေကိစ္စ သူ့ဟာသူ ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ ပြေလည်သွားပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် ဖြစ်လာလို့ရှိရင် တပ်မတော်သည်လည်း ပြည်ထောင်စု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာဆိုရင် ရှမ်းတွေတပ်ရင်း ဘယ်နှရင်းပို့ပါ။ ကချင်တွေတပ်ရင်း ဘယ် နှရင်းပို့ပါ။ ဟုတ်ပြီ။ အဲဒါ ပြည်ထောင်စုတပ်ပါ။ ကိုယ့်ပြည်နယ်မှာ ကိုယ့်တပ်တွေရှိမယ်။ အဲဒါက ပြည်နယ်ရဲ့ လုံခြုံရေးတပ်တွေဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု တပ်ကအဲလိုပါပဲ။ DSA မှာ ကချင်တစ်ယောက်တစ်မြီး မှမပါပါဘူး။ ကရင်တစ်ကောင်တစ်မြီးမှ မပါပါဘူး။ ရှိရင်လည်း သုံးပွင့် အထက်မတက်နိုင်ပါဘူး။
မေး - ၁၉၆၃မှာတစ်ကြိမ်၊ ၁၉၈၀-၈၁မှာ တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၉၄ မှာတစ်ကြိမ် KIO နဲ့ အစိုးရအကြား ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ခဲ့ တယ်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘော တူညီချက် ရတယ်။ ၂၀၁၁ခုနှစ် ဇွန်မှာအပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးစာချုပ်ပျက်ပြယ်တယ်။ ဒီကာလ တစ်လျှောက်လုံးမှာ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ KIO က တောက်လျှောက် တောင်းဆို ခဲ့တယ်။ အခုနိုင်ငံရေးနည်း လမ်းအရ ဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူလိုက်ပြီ။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာ မလဲ။
ဖြေ - ဘယ်လိုမျိုးဆိုရမလဲ။ ၁၇ နှစ်ဆိုတာ (၁၉၉၄ခုနှစ် အပစ်အ ခတ်ရပ်စဲရေး သဘော တူညီ ခဲ့ပြီး နောက်) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်က နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့အ တွက်။ ကျဆုံးနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့ အခွင့်အရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ တိုင်ပင်ချင် တယ်။ ဆွေးနွေးချင်တယ်။ တင်ပြချင်တယ်။ လုပ်ချင်တယ်။ လိုချင်တယ်။ အဲခါကျတော့ လွန်ခဲ့ သော ၁၉၉၄ခုနှစ်တုန်းကတော်တော် ကြိုးစား သုံးလေးနှစ်လောက် ကြိုးစားပြီးမှ အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေးရပါ တယ်။ အဲဒါက တပ်မတော်အစိုးရ ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ သူတို့က နောက်တက်လာမယ့် အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပါ။ အဲလိုပြောထားပြီးသား ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့် သူကိုယ်တိုင်လာပါတယ်။ သူက ဘာပြောလဲ။ နိုင်ငံရေးအစိုးရ တက်လာလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့တောင် ဘယ်ပြန်ရမလဲမသိဘူး။ စစ် တန်းလျားပြန်ရမယ်။ အဲဒီလိုပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း စောင့်ရင်းစောင့်ရင်း သည်းညည်းခံရင်းနဲ့ ညီလာခံလည်း တက်ပါတယ်။ တင်ပြပါတယ်။ ၁၉ ချက်။ ၁၃ ဖွဲ့တွေ အများကြီးတင်ပြပါတယ်။ အဲဒါ အားလုံး ဘယ်ရောက်သွား လဲဆိုတော့ မှတ်တမ်းတင်ထား ပေးပါ့မယ် ရောက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အတွက် ဘာတစ်ခုမှမရလိုက်ဘူး။ နောက်တစ်ခုကျတော့ တပ်ကနေ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ကို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ထိုးခိုင်းတယ်။ ထိုးတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း သဘောတူ တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလုပ်သလဲ လက်နက်ချခိုင်းတယ်။ ပါတီဖွဲ့ကွာတဲ့။ လွှတ်တော် ထဲဝင်ပါ။ အဲလိုဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက်က KIO အနေနဲ့ ကချင် တိုင်းရင်းသားတွေ အနေနဲ့က ဘာမှ မျှော်လင့်ချက်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆက်ကို ဆက်သွားနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြည်ထောင်စု ဆိုတာကို တိုင်းရင်းသား အများကြီး စုပြီးထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု၊ ပင်လုံ (ပင်လုံ စာချုပ်) မရှိရင် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက ကချင် အုပ်စု၊ ရှမ်းစုအစုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံသား တစ်ဦး ရဲ့ရပိုင်ခွင့် နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အတွက်က စုပေါင်းအခွင့်အရေး အဲဒါမရှိလို့ ကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် အုပ်စုအတွက် ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်စုတွေ အတွက်က ဘယ်လိုမှ ရပိုင်ခွင့်ကမရှိနိုင်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘက်က ဒါကိုပဲ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာ။
မေး - ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ဆိုတဲ့ ကိစ္စအပေါ် ဘယ်လိုသဘောထားပါသလဲ။
ဖြေ - နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် ဖြစ်လာလို့ရှိရင် တပ်မတော်သည်လည်း ပြည် ထောင်စု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာဆိုရင် ရှမ်းတွေတပ်ရင်း ဘယ်နှရင်း ပို့ပါ။ ကချင်တွေ တပ်ရင်း ဘယ်နှရင်းပို့ပါ။ ဟုတ်ပြီ။ အဲဒါ ပြည်ထောင်စု တပ်ပါ။ ကိုယ့်ပြည်နယ်မှာ ကိုယ့်တပ် တွေရှိမယ်။ အဲဒါက ပြည်နယ်ရဲ့ လုံခြုံရေးတပ်တွေဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ ပြည်ထောင် စု တပ်ကအဲလိုပါပဲ။ DSA မှာ ကချင် တစ်ယောက်တစ်မြီးမှမပါပါဘူး။ ကရင်တစ်ကောင် တစ်မြီးမှ မပါပါ ဘူး။ ရှိရင်လည်း သုံးပွင့်အထက် မတက်နိုင်ပါဘူး။
မေး - နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ တပ်မတော် တစ်ခုပဲ ရှိရမယ်ဆိုတာကိုရော လက်ခံပါသလား။
ဖြေ - ဟုတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ တပ်မတော်တစ်ခုပဲ ရှိရမှာပါ။ အဲဒီ တပ်မတော်သည် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ဖြစ်ရပါမယ်။ ဦးစီးချုပ် တစ်ယောက်တည်း ရှိရပါမယ်။ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်စစ်စစ် ဖြစ်ရပါမယ်။ မူဘောင်မရှိဘဲနဲ့တပ် ကိစ္စဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒုက္ခတော်တော်ဖြစ်ပါမယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတဲ့အခါ တပ်ကိစ္စပါလာ ပါလိမ့် မယ်။ အခုချိန်မှာ နိုင်ငံရေးမဆွေးနွေးဘဲနဲ့ စစ်ရေးပဲ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှအဖြေထွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ငြိမ်းချမ်း ရေးလို့သဘောထားလို့လည်း မရပါ ဘူး။ ပြန်ဖြစ်လာမှာပါ။ အခုအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်လို့ဆိုရင် အဲဒီအပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးက ဘာလုပ်မယ် ထင်သလဲဆိုတော့ ပြန်တိုက်ဖို့အတွက် ရိက္ခာစုတာ၊ ပြင်ဆင်တာ အချိန်ယူတဲ့ အပိုင်းပဲ ဖြစ်လာပါလိမ့် မယ်။ အဲဒါကြောင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲဖို့က လက်မခံပါဘူး။
မေး - နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းအရ KIO လိုချင်တဲ့အရာဘာပါလဲ။
ဖြေ - ကျွန်တော်တို့က တန်းတူရေး နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 6:20 AM No comments:
ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်မူကို လက်ခံကြပြီဆိုရင် ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း မဝေး တော့ပါပြီ (မောင်ဝံသ)
“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်က သမတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ ပြည်ထောင်စုမူ လို့ လက်ခံလာသလို နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ သတင်းဂျာနယ်တွေမှာလည်း ဖယ်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ခွဲထွက်ရေးမဟုတ်ဆိုတာကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် သိရှိလာတယ်။ အဘိုး၊ အဖေနဲ့ အန်ကယ် ကိုယ်တိုင် ထောင်ကျခံပြီး ဖယ်ဒရယ်ကို နားလည်လက်ခံလာအောင် ကြိုးပမ်းရကျိုးနပ်တယ်” လို့ ပြောလိုက်တာဗျ။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ တက်လာတဲ့ အစိုးရ လက်ထက်မှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးအတွက် အစိုးရကို ကိုယ် စားပြုပြီး စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ ယခင် မီးရထား ၀န်ကြီး၊ ယခု သမတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းဟာ ယခင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်က တိုင်းမှူးအဆင့်အထိ တာဝန်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ စစ်အရာရှိ ဟောင်းကြီးတစ်ဦး ဖြစ်တယ်ဗျ။ အဲဒီတော့ ဦးခွန်ထွန်းဦးစကားအရ ဖယ်ဒရယ်မူကို ခွဲထွက်ရေးမူအဖြစ် နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်လောက် သဘောထားလာခဲ့ကြတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်ကမှ အဲဒီအမြင်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့ သဘောလို့ ယူဆရမှာ ဖြစ်တယ်ဗျ။
ဖယ်ဒရယ်မူဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ် တစ်ဆစ်ချိုး ကွေ့သွားခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းမှာ အဓိက အကြောင်းပြချက်ကြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ။ အကြောင်းကတော့ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မြေမြှုပ် သင်္ဂြိုဟ်၊ သူ့အခေါ် ဆိုရှယ်လစ် ဒီမိုကရေစီစနစ်၊ ပြည်သူလူထု အများစုကြီး အခေါ် ဆိုရှယ်လစ် အရေခြုံတစ်ပါတီ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း ထူထောင်ရာမှာ သူ အဓိက ပေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းပြ ချက်က အဲဒီဖယ်ဒရယ်မူ ဖြစ်တယ်ဗျ။
၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ ထည့်သွင်း ထားတဲ့ ခွဲထွက်ခွင့် တစ်နည်း ဖယ်ဒရယ်မူကို အကြောင်း ပြုပြီး ပြည်နယ် တစ်ခုက ခွဲထွက်ဖို့ ကြံစည်ကြိုးပမ်းလာတာကြောင့် ပြည်ထောင်စုကြီး မပြိုကွဲသွားရ လေအောင် နိုင်ငံတော်အာဏာကို တပ်မတော်က ရယူ ထိန်းသိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီတုန်းက ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းက တိုင်းပြည်ကို အသိပေး ကြေညာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျ။
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်အရေးတော်ပုံကာလအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတစ်ခုမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းဟာ အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ(ပထစအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ရှမ်းစော်ဘွား အများစုကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းတဲ့ကိစ္စ)ပြီးတဲ့နောက် တပ်မတော်က ဘာကြောင့် အာဏာသိမ်းရတယ် ဆိုတာ တိုင်းပြည်ကို တရားဝင် အသိပေးကြေညာဖို့ အကြံရကျပ်နေတုန်း သူ့လက်ထောက် စစ်ဗိုလ်ကြီး တစ်ဦးက ကြေညာချက်တစ်စောင် ရေးယူလာတယ်။
အဲဒီကြေညာချက် ထဲမှာ ဖယ်ဒရယ်မူကြောင့် ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲရတော့မယ် အန္တရာယ်ရှိလာတဲ့ အတွက် အာဏာသိမ်းရတယ်လို့ ရေးထားတယ်။ အဲဒါကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းက ဖတ်ကြည့်ပြီး
“အေး ကောင်းတယ်၊ အဲဒီအတိုင်း ရေဒီယိုက အသံလွှင့် ကြေညာလိုက်” လို့ ပြောခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲဒီဖော်ပြချက်သာ မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းဟာ ဖယ်ဒရယ်မူကြောင့် ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲမှာကို တကယ်ပဲ စိုးရိမ်ပြီး အာဏာသိမ်းတာမဟုတ်ပဲ သိမ်းချင်လို့ သိမ်းပြီးမှ ဖယ်ဒရယ်မူ နဲ့ ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲမယ့် အနရာယ်ဆိုတာကို တမင်သက်သက် ဆင်ခြေဆင်လက် ဆင်နားရွက်လုပ် လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရမှာ ဖြစ်တယ်ဗျ။
ထားပါတော့ဗျာ။ အခုအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းရော၊ အဲဒီကြေညာချက်ရေးယူလာတဲ့ စစ်ဗိုလ်ကြီး ရော၊ အဲဒီအာဏာသိမ်းပွဲ ပြီးနောက် ဖွဲ့စည်းတဲ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် အကုန်လုံးနီးပါး လောက်မရှိ ကြတော့ပြီမို့ ဒီကိစကို အကျယ်အကျယ် မငြိမ်းဖွယ်လုပ် မနေချင်တော့ပါဘူးဗျာ။ တစ်ဆက်တည်းမှာ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုက-
”ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲ မဲ့ အနရာယ် အမှန်တကယ်ရှိနေပြီလို့ ကျုပ်ကို နှစ်မိနစ်လောက်ပဲ ကြိုပြောပါ။ အာဏာသိမ်းစရာမလိုပါဘူး၊ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် တပ်မတော်ကို အာဏာအပ်မှာပါ”
လို့ ပြောခဲ့တာကို ၁၉၆၆ခု စက်တင်ဘာလက သတင်းထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် နားနဲ့ဆတ်ဆတ် ကြားခဲ့ရပြီး သတင်းရေး ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုလည်း အခုအချိန်မှာ မရှိ တော့ပြီမို့ ဒီကိစ္စကို ရာဇ၀င်ထဲမှာ ထားရစ်ခဲ့ … လို့ ဆိုရတော့မပေါ့ဗျာ။
ဖယ်ဒရယ်မူကြောင့် အာဏာသိမ်းတာလား။ အာဏာသိမ်း ပြီးမှ ဖယ်ဒရယ်မူကို အကြောင်းပြချက် ဆင်ခြေ အဖြစ် ဆွဲသုံးသလား ဆိုတဲ့ အချက်ကို ရာဇ၀င်ထဲမှာ ထားရစ်ခဲ့လို့ ရကောင်းရမှာဖြစ်ပေမယ့် ရာဇ၀င် ထဲမှာ မနေရစ်ခဲ့ဘဲ အဲဒီနောက် နှစ်ပေါင်းများစွာ အထိ လိုက်လာခဲ့တဲ့ကိစ္စကတော့ မြန်မာ ပြည်သူ အစိတ် အပိုင်းတစ်ချို့ အထူး သဖြင့် မျိုးဆက်သစ် တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်အများစု စိတ်ထဲ ဖယ် ဒရယ်မူ ဆိုတာကို ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲရေးလမ်းစအဖြစ် စွဲနေကြတဲ့ကိစ ဖြစ်တယ်ဗျ။
တကယ်ပဲ စိုးရိမ်လို့လေလား။ ဒါမှမဟုတ် သူ အာဏာ သိမ်းတဲ့ကိစကို တရားမျှတတယ် (justify) လို့ အများက မြင်အောင် လေလားတော့မသိဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းနဲ့သူ ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရပုံသဏ္ဍာန် နှစ်ခု (တော်လှန်ရေးကောင်စီနဲ့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ)က အဲဒီအချက်ကို ထပ်တလဲလဲ သံမှိုနှက်သလို နှက်ခဲ့ တာကြောင့်လည်း အဲသလို စွဲနေခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်ဗျ။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းက ဖယ်ဒရယ်မူကို ရိုးရိုးသားသား စိုးရိမ် စိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မရိုးမသား အသုံးချ ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ် သူကတော့ အဲဒီ ပုစ္ဆာကို ပဟေဠိအဖြစ်ထားခဲ့ပြီး လောကထဲက ထွက်သွားခဲ့ပြီမို့ သူ့ အတွက်တော့ ပြသနာမရှိတော့ဘူးဗျာ။ ပြသနာရှိနေတာက ဖယ်ဒရယ် မူကို ပြည်ထောင်စုဖြိုခွဲရေး မူအဖြစ် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် အဆက် ဆက်က သဘောထားနေခဲ့ကြတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ပြည် တွင်းစစ်မီးမငြိမ်းနိုင်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ကိစ္စြဖစ်တယ်ဗျ။
တပ်မတော်ခေါင်း ဆောင်တွေက ဖယ်ဒရယ်မူဆိုတဲ့စကား ပြောလိုက်တာနဲ့ ပြောတဲ့သူကို မျက်ထောင့် နီကြီးတွေနဲ့ ကြည့်၊ ဖယ်ဒရယ်မူကို ကိုင်စွဲပြီး မိမိ လူမျိုးစု အခွင့်အရေး (nationality’s rights)အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေ သူတွေကို လူမျိုးစုသောင်းကျန်းသူတွေအဖြစ် ရှုမြင်လာကြရင်းနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကင်းမဲ့ပြီး ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းမနီး ဖြစ်လာခဲ့တာ အခုတိုင် ဖြစ်တယ်ဗျ။ ငြိမ်းချမ်းရေးမှ မရ တော့လည်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကာမှာ မပြောနဲ့ ဒေသတွင်းမှာ တောင် ဓားမနောက်ပိတ်ခွေးဖြစ်တာ ဘာဆန်းသလဲဗျာ။
အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့ အကျိုးဆက် အဖြစ်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်လည်း အတော် ကလေးရလာနေပြီမို့ ဖယ်ဒရယ်မူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ်တိုင် ပြောနေ ဆိုနေ ရေးနေ သားနေကြပြီမို့ ဖယ်ဒရယ်မူနဲ့ပတ်သက်ပြီး တကယ် အဓိပ္ပယ် အစစ်အမှန် ကို ပြည်သူတွေ အတော်ကလေး သဘောပေါက် နားလည်နေကြပြီလို့ ကျွန်တော် ယူဆတယ်ဗျာ။ တပ် မတော်သား တွေလည်း ဖယ်ဒရယ်မူနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့အရင်တုန်းက ရှိထားခဲ့တဲ့ နားလည် သဘောပေါက်မှုဟာ မှန်မမှန်ဆိုတာကို ပြန်လည် ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခွင့်ရရှိ နေကြပြီဖြစ်တယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ့ ခေတ်ဂျာနယ်မှာ ဦးအေးသာအောင် အခန်းဆက်ရေးခဲ့တဲ့ ပင်လုံနဲ့ ဖယ်ဒရယ် ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ရှုခဲ့ကြသူများအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ အတိတ်ကို မှန်မှန် ကန်ကန်သိရှိပြီး အနာဂတ် အတွက် မြော်မြော်မြင်မြင်နဲ့ တွေးဆနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည် တယ်ဗျ။
တကယ်တော့ ၁၉၆၁ အစောပိုင်းကာလမှာ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်အချို့ (အထူးသဖြင့် ရှမ်းစော်ဘွား တွေ) ပြည်ထောင်စု အစိုးရကို အရေးဆိုဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြတာက ခွဲထွက်ခွင့်တောင်းဖို့ မဟုတ် ဘူးဗျ။ ပင်လုံညီလာခံမှာ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ အခြေခံမူများမှ တစ်စတစ်စ သွေဖည်လာပြီး တစ်နေ့ တခြားတိုးတက် ဆုံးရှုံးလာနေတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအခွင့်အရေးတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဗျ။
တစ်နည်းပြော ရရင် ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအခွင့် အရေးတွေကို လက်တွေ့ မှာ အမှန်တကယ်ရရှိရေး တောင်းဆိုဖို့သာ စီစဉ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်ဗျ။ နိုင်ငံရေးရဲ့ သဘာဝအတိုင်း အကျပ် ကိုင်တာ ဖိအားပေးတာ ဈေးဆစ်တာ ဈေးကိုင်တာတွေတော့ ပါချင် လည်းပါမှာ ပေါ့ဗျာ။
သူတို့ အဓိကလိုချင်ကြတာက ပြည်ထောင်စုအာဏာနဲ့ ပြည်နယ်တွေရဲ့ အာဏာကို ပင်လုံညီလာခံ (တစ်နည်း)၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေပါ ဖော်ပြချက်တွေအတိုင်း တိတိကျကျ ခွဲဝေပေးဖို့ပဲ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ အထောက်အထားတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံလို့ တရားဝင် ခေါ်ထားပေမယ့် တိုင်းရင်းသားတွေ ကတော့” ပြည်ထောင်စု အမည်ခံ တစ်ပြည်ထောင်တည်း” အဖြစ် တစ်လျှောက်လုံး ရှုမြင်ခဲ့ကြ တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်ကြတယ် ဆိုရင်တော့ တိုင်းရင်းသား တွေ ရင်ထဲက အဲဒီအမြင် ပပျောက်လွင့်စင် သွားအောင် လူများစုဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေက လုပ်ဆောင်ကြ ရမှာ ဖြစ်တယ်ဗျ။ ဒီတော့မှသာ ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း မဝေးတော့မယ့် အခြေအနေ ကို ဆိုက်ရောက်မှာ ဖြစ်တယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ သေနတ်သံ တွေ မစဲသေးဘူးဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြား ရတိုင်း လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာ တိုင်းရင်းသား သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး ဗိသုကာ၊ အမျိုးသားခေါင်း ဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စကား တစ်ခွန်းကိုပဲ အမြဲ ကြား ယောင်မိတယ်ဗျာ။ ၁၉၄၇ အခြေခံ ဥပဒေထဲမှာ ပြည်နယ် ခွဲထွက်ခွင့် ပုဒ်မထည့်ဖို့ ကိစကို မြန်မာခေါင်းဆောင်တချို့က ကန့်ကွက်ကြ တော့ ဗိုလ်ချုပ်က …
(မှတ်ချက်။ ။ ၁၉၆၁-၆၂မှာ အတိအလင်း တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ရှမ်းမူလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဖက်ဒရယ်မူ သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်မူ အကြောင်းနဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာလိုသူများ ‘မြန်မာ့သမိုင်း ဖြစ်ရပ်အမှန်များ ရေးသားပြုစုရေးအဖွဲ’ က စိစစ် ထုတ်ဝေတဲ့ ]]၁၉၅၈-၁၉၆၂ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး}} တတိယတွဲ အခန်း၁၃၊ ယင်းစာအုပ် စတုတတွဲ အခန်း ၁၄၊ အခန်း ၁၅၊ အခန်း ၁၆၊ ထို့အပြင် အခန်း ၁၇ စာမျက်နှာ ၂၃၅ အောက်ခြေမှတ်စုပါ ၁၉၆၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ပြည်လမ်း အသံလွှင့်ရုံ လူမျိုးပေါင်းစုံနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲတွင် ဦးထွန်းမြင့်(တောင်ကြီး) ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက် တို့ကို စေ့စေ့စပ်စပ် ဖတ်ရှုလေ့လာ ဆင်ခြင် စဉ်းစားသင့်ပါကြောင်း။)
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 6:11 AM No comments:
Media Release from the Kachin National Organizatio...
Letter to President Obama from Kachin Communities(...
KIO ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ပညာရေးဌာနတာဝန်ခ...
Kachin Canadian Association Introduction Letter